matthieu grbli မော်ကွန်းတိုက်မှစာသားများ - စာမျက်နှာ ၂ မှ ၂ - အခြေခံအုတ်မြစ်
ကြိုဆို Categories TEXT မဿဲGröbli
KAMITE သည်အမည်းရောင်ရှိသောလူတစ် ဦး သာမကဘဲနှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျွန်ပြုမှုနှင့်အနှစ် ၁၅၀ အကြာ၌ပင်ထိုက်တန်သူဆက်လက်တည်ရှိနေသည့်သူ၏သမိုင်းကြောင်းကိုကမာမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။
မူလကမူလကရေများသည်ရှုပ်ထွေးသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်ဖြစ်သောဟင်းချိုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရာအားလုံး၏တည်ငြိမ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ဒီအလေးချိန်ဟာသိပ်သည်းပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကြောင့် ...
ဘာသာတရားသည်ကြောက်ရွံ့မှုမှ၎င်း၏စွမ်းအားကိုရရှိသည်။ အပြစ်ပေးခံရမည်ကိုကြောက်။ သေရမည်ကိုကြောက်။ ငရဲရှိမည်ကိုစိုးရိမ်သည်။ ယူလာပုံရသည်
လူသားရဲ့ chimerical သဘောသဘာဝကိုကြည့်ကြစို့ ... ငါတို့အရမ်းစိတ်ရှုပ်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေလျှံကျသွားတယ်။ programme automatons တွေလိုပါပဲ၊ ငါတို့နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်တယ်။
L'individu qui se trouve sous l'emprise de la colère et essaie de la contrôler, de la réprimer ou de la surmonter, s'expose inévitablement à une situation conflictuelle. Une lutte s'établit...
Il fut un temps où les hommes maîtrisaient leur langue pour que celle-ci ne les condamne pas. Ils étaient prompts en actions caritatives pour que la main droite apporte à...
သန့်ရှင်းသောဘုရား Grail အောင်နိုင်
အမှောင်ထုသည်ကောင်းကင်တန်ဆာကိုခြယ်သထားသည်၊ သံချပ်ကာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးခေါင်းပေါ်မှာ ဦး ထုပ်ဆောင်းထားသောကြေးဝါဒိုင်းကာဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
နို ၀ င်ဘာ ၁၈၈၄ မှဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၈၅ အထိကျင်းပခဲ့သောဘာလင်ကွန်ဖရင့်ကိုကိုလိုနီခေတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်အဓိပတိ Bismarck ကစီစဉ်ခဲ့သည်။
Kamite Renaissance အလံ၏အရောင်များကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ အနီရောင် - အနက်ရောင် - အစိမ်း - အဝါရောင်အရောင်များသည်သက်ရှိအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမော်လီကျူးသုံးခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အနီရောင်ဟီမိုဂလိုဗင်သည်ပရိုတင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ...
မဿဲ Grobli ၏ကဗျာများ
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အညီနေထိုင်ပါ
Catalyseur de nos émotions, l'autre est l'élément déclencheur de nos désirs, le révélateur de notre insuffisance, le stimulus activateur de notre intellect, l'artefact qui fait revenir à la vie consciente...
ကလေး၏ရှည်လျားသော hedonistic မြစ်သည်သူ၏သတိလစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လုံခြုံရေးနှင့်ပကတိငြိမ်းချမ်းစွာရေချိုးခြင်းတို့၏ရင်းမြစ်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိတည်ရှိနေသောဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားမှုကိုတွေ့ရှိလိုသည်။
Alimentée par la convoitise, l'envie de possession et la jalousie, la partie chimérique des zones abyssales de notre cerveau reptilien s'empare de notre Moi authentique en le transformant en monstre...
2 ၏စာမျက်နှာ2Avant 1 2